Pave nemakore makumi mashanu kubva pakatumirwa meseji pakomputa yekutanga "ARPANET" | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi Makore makumi mashanu apfuura kubvira pakatumirwa meseji yekutanga mune yanhasi yatichadaidza mutungamiriri wezvazviri nhasi iyo INTERNET. Uye ndizvo here PaChipiri, Gumiguru 29, 1969 na22: 30 masikati, California nguva muImba 3420 kuUCLA Boelter Hall (Yunivhesiti yeCalifornia, Los Angeles), vaongorori vakagadzira kubatana kwekutanga pakati pemakomputa maviri ari kure pane yeuto reU.S. ARPANET.
Zuva riya, yekutanga data yekuparadzira kure yaive kubva kune komputa kuUCLA kune imwe komputa kuStanford Research Institute (yava kunzi SRI International) kune rimwe divi reCalifornia.
Ichi Chipiri, Gumiguru 29, 2019 yakaratidza kuberekwa kweAARPANET, yekutanga kure data kufambisa network, nekudaro kuisa hwaro hweInternet hwatinoziva nhasi.
ARPANET inomirira Advanced Research Projects Agency Network, ndiko kuti, Advanced Research Projects Agency Network, muviri unozivikanwa seDziviriro Advanced Research Projects Agency.
Kubatana kwekutanga kwaive pakati pekombuta kuYunivhesiti yeCalifornia, Los Angeles (UCLA) uye imwe komputa kuStanford Research Institute. Iyi yekutanga feat yemasayendisiti yakaita kuti zvikwanise kutumira meseji yekutanga munhoroondo pamusoro peInternet.
Yekutanga ARPANET yaive neane maIMP akaiswa mu:
UCLA, uko Kleinrock akagadzira iyo Center yeNetwork Kuyerwa. Iyo SDS Sigma 7 komputa ndiyo yakatanga kubatana.
Iyo Augmentation Research Center, kuStanford Research Institute, uko Doug Engelbart akagadzira iyo inoverengeka National Language Services (NLS) system, iri ichangoburwa hypertext system. Iyo SDS 940 komputa ndiyo yekutanga kubatana.
Yunivhesiti yeKalifornia, ine IBM 360 komputa.
Dhipatimendi reMifananidzo, Yunivhesiti yeUtah, uko Ivan Sutherland akatamira. Iine PDP-10 pakutanga yakabatana.
Uye 1961, Leonard Kleinrock, akaburitsa yekutanga dzidziso yezvinyorwa nezve kuchinjaniswa kwemapakeji. Izvo zvawakangoisa hwaro hwenheyo yekuchinja kwepaketi, tekinoroji iyo Internet yakavakirwa.
Akagadzira dzidziso yemasvomhu yedata network. Gare gare, inozoshandiswa mukuzvarwa kwekutanga ARPANET network.
Iye zvakare ane basa rekumisikidza nzira yekutanga yeARPANET yekuyera, izvo zvakamubvumidza kumisikidza mashandiro ekuita uye kuongorora maitiro eARPANET.
Wokutanga meseji yakatumirwa uchishandisa network nyowani yaive "LO", asi yakanga isingazivi. Kunyangwe ivo masayendisiti vanga vafunga kutumira izwi rekuti "PINDA" asi havana kubvira mushure mekunyora tsamba mbiri dzekutanga meseji yakatumirwa. Sisitimu yakarovera, asi kwete tsamba mbiri dzekutanga, "LO" dzisati dzatumirwa. Nguva pfupi yapfuura, netiweki yakamiswazve, iwo meseji yaidikanwa yakafambiswa muhuwandu hwayo, uye nguva nyowani yekubatana yakazvarwa.
Pakutanga, ARPANET yaifanira kubvumidza mauto nemahurumende kuti vataurirane zviri nyore nemumwe.
"Pakutanga, zvaingove zvekuchengetedza mari uye kuwedzera kubatana nekugovana zviwanikwa apo vanhu panzvimbo yega yega yeARPA (ARPANET) vaigona kubatanidza nekushandisa makomputa kune mamwe masayiti," akadaro Marc Weber, director we curation yeiyo Internet nhoroondo chirongwa paSilicon Valley Museum yeComputer Nhoroondo. "Iko kudiwa chaiko kwaive kugovana zviwanikwa, chinangwa chakapamhama ndechekupa mukana kugovana network," akadaro Marc Weber.
Makore makumi mashanu gare gare, Leonard Kleinrock akataura izvozvo Haana kumbofungidzira kuti panguva iyoyo chirongwa chemauto chingave chimwe chekufambira mberi kwetekinoroji kwaizoshandura kutaurirana nekuti pfungwa yake yaive yekungogadzira makomputa maviri kutaurirana kana kuita kuti vanhu vataure nemakomputa.
'Ndakanga ndisati ndaona pasocial media ichitarisa zvachose. Ndakafunga kuita kuti vanhu vataurirane nemakomputa, kana makomputa, asi kwete vanhu neumwe, "akadaro Leonard Kleinrock, uyo akasvitsa makore makumi masere nemashanu muna Chikumi. Munguva yemakumi mashanu emakore echiitiko ichi, yakavhurawo imwe rabhoritari yakatsaurirwa kuInternet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Pave nemakore makumi mashanu kubva pakatumirwa meseji pane yekutanga network network "ARPANET"
ALT Linux Workstation, ALT Linux Server, ALT Linux Dzidzo inosvika yakavakirwa paP9